Eyona ndlela yokuhamba ukusuka eAmsterdam ukuya eBerlin ngololiwe | Gcina A Isitimela
ekhaya > Travel Europe > Eyona ndlela yokuhamba ukusuka eAmsterdam ukuya eBerlin ngololiwe
Ukuhamba usuka eAmsterdam usiya eBerlin ngololiwe kunika umhambi into ongalibalekiyo kunye nolona khetho lubalaseleyo lwe-Eco. Nangona uhambo iiyure ezintandathu kancane kancane, intuthuzelo ezinikezelwa oololiwe -ngomtsalane yohambo obalaseleyo. nge ubuhle bendalo apha endleleni, kunye imoto yokutyela ukunceda lihlaleni ixesha, uhambo ekugqibeleni ukuba ngokukhawuleza kakhulu kunokuba bekulindelwe. Naku oko kuthethwa oololiwe eYurophu inikeza le ndlela.
Ukufika kule mihla Hauptbahnhof (HbF) xa usuka eAmsterdam usiya eBerlin okanye eBerlin usiya eAmsterdam ngololiwe, kunzima ukuba ndonwabe ngayo uhambo eseza. Esi sikhululo ke isakhiwo kuhlinzwa imigangatho eziliqela, apho oololiwe awelela kwentloko yakho nge naLindiili emsebenzini. Elidityaniswe kakuhle kakhulu Kwabaseleyo apho esixekweni ngokusebenzisa imigca Metro kunye ibhasi station, kumbindi Berlin. Ukuba sele ulihlawulele yokuhlala e Berlin, ukhetho elungileyo nje umzuzu ukusuka esitishini nguye amabanga Hotel.
IBerlin ukuya eAmsterdam ngololiwe
Xa usuka eAmsterdam usiya eBerlin ngololiwe, ningena Station odumileyo Central e Amsterdam, enye izakhiwo ezininzi yemifuziselo yesixeko, kwakunye moya ka Schipol. kalula, i Station Central kwakhiwa 1889, kwaye namhlanje ifumana ngayo 250,000 abakhweli ngosuku. Esi sikhululo signposted kakuhle kakhulu. Ukuba awukwazi ukuthetha Dutch, khumbula nje ukuba igama liqonga “track”. Ukuba kuyafuneka, uyakwazi ukuthetha ezinye IsiNgesi, ukususela ngabasebenzi isikhululo uthetha ulwimi. e Amsterdam, ukhetho elungileyo yokuhlala kufuphi isikhululo ophambili Ibis Style. Pha, indawo ugqibelele kuba isikhululo sikaloliwe, ukuba bubulungisa na iziko, kufutshane neendawo umdla.
IAmsterdam eya eBerlin itikiti lesitimela
Inkonzo yoololiwe eAmsterdam ukuya eBerlin ngololiwe ihlala iphindaphindwe, kwaye kukho malunga ezimbini oololiwe ngeyure. oololiwe imini ezininzi zinika inkonzo obutofotofo kakhulu, kodwa bit olucothayo, njengoko ukumisa kwizixeko ezininzi endleleni. Uloliwe wokuqala ukusuka Amsterdam Berlin ihamba ngo- 6:58 am, Ekufikeni ikomkhulu zesiJamani kwi 13:20. Ukusuka Berlin ku Amsterdam, uloliwe wokuqala ihamba ngo- 06:37 wafika 13:08. Inxalenye intle uhambo emini, ngaphandle kothandabuza, nguye ekumeni. izixeko ezincinane Kumbindi Germany nase-Netherlands, kwakunye ezintabeni kunye nobume zasemaphandleni, are obumangalisayo nakanjani!
IAmsterdam eya eBrussels itikiti lesitimela
IAmsterdam eya eLondon kwitikiti lesitimela
Amsterdam ukuya eParis itikiti lesitimela
Indlela yokuhlala ngololiwe ukusuka Amsterdam Berlin zahlukahlukene. Ezi zibe ezitroneni kulimo oluqhelekileyo ukuya ezingontsini air-conditioner ukuba babe izihlalo uhlezi nkqu ukuguqula ku ezililini. Ekubeni yohambo olude, bahambe kwenye yezi tile, nelinika RT ezifana ukukhanya, ulawulo lobushushu kunye iiplagi ze laptops neselula, leyo eyenza kube lula ukuba ukubukela eshukumayo ethe zava ikhabhathi lwakho ngexesha lonke uhambo. Khumbula ukuba bathenge amatikiti zakho ubuncinane iiveki ezimbini kwangethuba ukuze qinisekisa kwenzeka akukho ngxaki.
Thina kakhulu ngokuqinisekileyo ukuba uya ndimnqule ngebhayisikile ukusuka Amsterdam Berlin, and vice versa. Ewe, khona apho kuya kubakho olunye uhambo kuba wakube uzame yona kwixesha lokuqala, uya kusoloko ufuna ukuthatha uloliwe kwakhona kwaye ngokupheleleyo onwabele uhambo.
ke, ngaba ukulungele zokuhamba train phakathi kweNetherlands neJamani ngololiwe? ukuba kunjalo bhuka itikiti lakho kaloliwe kunye nathi ngaphakathi 3 imizuzu, amazinga libiza kancinane kwaye wayekiswa iimali ukubhukisha owakhe!
Ingaba ufuna kuzakulungisa post yethu blog kwi sayithi yakho, ngoku nqakraza apha: http://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/amsterdam-berlin-train/- (Skrolela ezantsi ukubona Code lungisela)
train Travel travelamsterdam umhambi travelgermany travelnetherlands traveltips